Xaashiyaha, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Fiqi ahaaneed Masiixi ahaaneed
Hawsha Kaniisadda Dunida ee Ilaah oo dhan (WKG) waa in lala shaqeeyo Ciise si loo noolaado oo injiilka loogu wacdiyo. Fahamkeenna Ciise iyo warkiisa wanaagsan ee nimcadiisa ayaa aasaas ahaan loo beddelay iyada oo loo marayo dib-u-habayn xagga waxbaristeenna ah tobankii sano ee u dambaysay qarnigii 20-aad.
35 aaminaad oo ah WKG
Ururinta qodobbada ku saabsan caqiidooyinka,
in lagu xusay caqiidada Kaniisadda Adduunka ee Ilaah
Boqortooyada Ilaahay - waxaa qoray Dr. Gary Deddo
Doorka haweenka ee kaniisada (WKG)
Dumarku ma noqon karaan odayaal?
Buuggu ma u baahan yahay doorar kaladuwan oo ragga iyo dumarka ah?
Waa maxay doorka haweenka iyo ragga ee Axdiga Hore?
Muxuu Ciise ula dhaqmay haweenka?
Maxay ahayd dowrka haweenka ee kaniisadda rasuullada?
Muxuu Rasuul Bawlos ka yidhi dhererka timaha ee timaha iyo madaxeeda?
Dumarku way aamusan yihiin bulshada dhexdeeda!
Su'aalaha ku saabsan 1 Timoteyos 2,11-15?
Meelaha iftiinka ama khatarta qarsoon?
Wuxuu bixiyaa jawaabo su'aalaha muhiimka ah wuxuuna muujiyaa waxa Kitaabka Quduuska ah ka leeyahay adduunka ruuxiga.
Ma jiraa adduun ruuxi ah?
Ibliis ma jiraa?
Ma inaan su’aal weydiinnaa xiddigaha?
Isgaarsiinta kuwa dhintay
Maxay rasuulladii baray?
Bawlos wuxuu wacdiyey injiilka
She'ool wuxuu keenaa mid ka mid ah doodaha ugu kulul maanta
bulshada masiixiga dhexdeeda.
Eebbe waa. , ,
Haddii aad weydiin lahayd Ilaah su’aal
Raadinta weligeed ah
Sida Eebbe isu muujiyo
«Ilaah kale ma jiro aniga mooyee»
Ilaah wuxuu shaaca ka qaaday Masiixa
Midkiiba saddex iyo saddex saddex
Xiriirka Aadanaha Eebbe
Ciise Masiix, kan iskutallaabta lagu qodbay
Meeshayada miiska Rabbiga
Iskutallaabta ka qaadida aragti taariikhi ah
Khudbaddiisii ​​ugu dambeysay ee Ciise
Sarakicidda Ciise Masiix - Rajadayadayada Madax-furashada
Xabaal madhan - sababaha loo rumeysan karo
Wuu nool yahay!
Rumeyso nolol maalmeedka
Tusaalooyinka waa weyn
Iimaanka iyo kormeerka
Miyuu Ilaah noqon karaa wax aan macquul aheyn?
Baahida loo qabo madax furasho
Waxaan u baahanahay injiilka - warka wanaagsan.
Injiilka Masiixu wuxuu keenayaa nabadgelyada maskaxda,
Nasiib wacan iyo guul shaqsiyeed.
Nabad ku hel Masiixa
Midba midka kale jeclaada
Wax ka qabashada fikradaha cusub
Sharciga iyo balan qaadkii
Tag nasashada Ilaahay
Khamri cusub oo ku jira dhalo cusub
Xiriirka lala leeyahay Ilaah
Xiriirka lala yeelanayo lab ama dhadig
Soo dajinta: aragti guul ah
Wax sii sheegidda, rafcaan - kala sooc, faham
Wanku waa istaahilaa
Maskaxda ku hay waxsii sheegyada